प्रदेश नम्बर २को नाम मधेस राख्न किन आपत्ति- बाबुराम भट्टराई। - Ujyaalo Sandesh Online
प्रदेश नम्बर २को नाम मधेस राख्न किन आपत्ति- बाबुराम भट्टराई।
समाचार डेस्क/समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले २ नम्बर प्रदेशको नाम तोक्न नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले बुधबार बिहान ट्विट गर्दै २ नम्बर प्रदेशको नाम मधेस राख्न किन आपत्ति भयो ? भनी प्रश्न गरेका छन्।
बाबुराम भट्टराईको ट्विट।
मंगलबार राति मात्रै पनि उनले कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिले जातीय पहिचानलाई भन्दा कुनै धार्मिक पात्रको नामलाई अघि सारेकोमा अचम्म लागेको भनी ट्विट गरेका थिए। ‘नेकपा नाम गरेको दलको हर्कत देखेर मार्क्स,एंगेल्स,लेनिन, माओ जीवित भए के भन्दा हुन् ?’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए।
धिमाल विद्यार्थी मन्चका महासचिव सुनिल धिमाल लगायतलाई कारबाही।
ट्याक्टरको ठोक्करले झापामा एकको मृत्यु।